आज नेपाल र जोर्डान भिड्दै ! अगाडी भएको भेटमा कस्तो छ तथ्यांक - लाइभ कसरी हेर्ने ?
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 7, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमान्डौ । नेपालले आज बेलुकी ९:४५ बजे जोर्डनको सामना गर्ने छ।
नेपालले आफ्नो समूहका ६ वटा खेल खेलिसकेको छ र अब दुइ खेल खेल्न बाकी रहेको छ। ६ खेल मध्ये दुइ खेलमा चाइनिज ताइपाइलाइ पराजित गरेको नेपालले ४ वटा खेलमा निराशाजनक हार बेहोरेको थियो।
नेपालले अबको दुइ खेलमा, जुन ७ तारिकमा जोर्डनको सामना गर्ने छ भने अर्को खेलमा अस्ट्रेलियाको सामना गर्ने छ। विश्वकप छनोटको समूहमा चौथौ स्थानमा रहेको नेपालको विश्वकप छनोटमा पुग्ने आशा न्यून रहे पनि एसियन कप २०२३ मा छनोट हुने मौका भने जिवितै छ।
जोर्डनबिरुद्द नेपालका पछिल्ला खेलहरुको नतिजा कस्तो थियो त ?
नेपाल र जोर्डन अहिलेसम्म तिन पटक आमने सामने आएका छन्। २०११ को जुलाईमा भएको पहिलो राउण्डको खेलमा जोर्डनले नेपाललाइ ९-० को बिशाल गोलान्तरले पराजित गरेको थियो। त्यसकै एक साता पछि नेपाली भुमिमा खेलिएको खेलमा नेपालले १-१ को बराबरी गरेको थियो।
त्यसपछि २०२२ को विश्वकप छनोट अन्तर्गतको पहिलो राउण्डमा नेपालले जोर्डनको घरेलु स्थानमा जोर्डनको सामना गरेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल ३-० गोलान्तरले पराजित भएको थियो।
कोरोनका कारण नेपालमा हुने भनिएको खेल कुवेत सारियो त्यसैले कुवेतकै मैदानमा नेपालले आफ्ना सबै खेल खेल्ने भएको हो। उही शिलसिलामा नेपालले चाइनिज ताइपेइलाइ पराजित गरिसकेको छ भने अब दोस्रो जितको पर्खाइमा छ।
नेपाल र जोर्डान बिचको खेल के मा हेर्ने त?
नेपाल र जोर्डानको खेल कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने छ। खेल आज बेलुकी ९:४५ बजे हुने छ ।
साथै विभिन्न युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजले पनि उपलब्ध गराउदै आएका छन !
Posted in गृहपृष्ठ, फुटबल, मुख्य खबर, राष्ट्रिय फुटबलTagged #nepal vs jordan
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमान्डौ। नेपालको अन्तिम बाटो के हो त ? राउण्ड दुइ अन्तर्गत चाइनिज ताइपेलाइ पहिलो खेलमा २-० गोलान्तरले पराजित गरेको नेपालले हिजो भएको खेलमा जोर्डनसंग ३-० को हार बेहोरेको छ। २४ औ मिनेटमा नेपालको पेनाल्टी बोक्समा फल हुदा, जोर्डनले गोल गर्दै पहिलो अग्रता लिएको थियो। किरण चेम्जोङ्गको उत्कृष्ट […]
फुटबलका मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीना दिने अल्मुताइरीको घोषणा
घरेलु मैदानमा म्यानचेस्टर युनाईटेडको संघर्ष जारी, एभर्टन संग बराबरीमा रोकियो
ए डिभिजन लिगको पहिलो खेलमा भोलि सातदोबाटो युथ क्लब र फ्रेण्ड्स क्लब भिड्दै